Aashitada Sulfuric-ka ayaa roob ka da'aya Dunida mahad Donald Trump | Saadaasha Shabakadda
Madaxweynaha Mareykanka, Donald TrumpHadduu sidan ku sii socdana wuxuu taariikhda ku galayaa inuu yahay madaxweynihii ugu yaraa ee wax ka qabta meeraha. Wax yar ayey isaga u tahay isaga in celceliska heer kulka adduunku uu sii kordhayo iyo in barafka qotoma uu dhalaalayo (waa wax, haba u diiddee, uu aakhirka saameyn ku yeelan doono dalkiisa). Waxay ka baxday Heshiiskii Paris maxaa yeelay, waxtarla'aan maahan, Isagu ma aaminsana in isbeddelka cimilada iyo insaaniyadnimadu ay sii xumaynayso mooyee.
Dabeecaddani kama farxin saynisyahanno badan oo caan ah, sida astrophysicist-ka caanka ah Stephen Hawking. Sida uu sheegay, mahadsanid Trump waxaan ku dhamaan karnaa 'haysashada' (dhab ahaantii, ma jiri karto nolol) meeraha Dunida oo leh xaalado la mid ah kuwii Venus, taas oo ah, leh Heerkulka 250 digrii iyo qubayska sulfuric acid, sida loo sharaxay BBC.
Astrophysicist-ku aad buu rajo xumo uga qabaa mustaqbalka aadanaha. Aragtidiisa, maalmaheena way koobanyihiin. Isagoo jira 75 sano, wuxuu aaminsan yahay in hunguriga iyo gardarrada ay ku milmeen hiddo-wadaha aadanaha. "Lama arko in khilaafaadka ay sii yaraanayaan isla markaana horumarinta tikniyoolajiyadaha militariga iyo hubka wax gumaada ay horseedi karaan musiibo," ayuu sharaxay.
Xalka dhibaatadani waa iyada oo loo marayo gumeysto meerayaasha kale, sida Mars, taas oo ah waxa aan ognahay illaa iyo hadda in ay leedahay shuruudo la aqbali karo ama ka yar si loo taageero nolosha. Waana taas, haddii qiyaastii 3.800-3.100 milyan oo sano ka hor ay biyo qabsan karto, sida lagu muujiyay sawirrada nooga imanaya dayax gacmeedyada NASA, Maxay u awoodi weyday inay markale isu keento muddada dhexe ama muddada dheer?
Xaqiiqdii, horeyba waa loohadlay meeraha cas cas, taas oo runtii ah mowduuc aad u xiiso badan in wuxuu ka badbaadin karaa aadanaha baabi'inta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Sulfuric acid ayaa roobka ku di'i kara Dunida mahad Donald Trump